Dhabayaal sharci oo lagu soo geli karo EU oo la baarayo - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Dhabayaal sharci oo lagu soo geli karo EU oo la baarayo
La daabacay onsdag 27 januari 2016 kl 11.30
Maria Ferm oo ah xildhibaanad ka tirsan xisbiga Milöpartiet ayaa loo xilsaaray in ay muddo labo sanno ah braaitaan ku sameyso dhabayaal cusub oo sharci oo magangeliyo lagu dalban karo.
Dowladda ayaa khamiistii sidas go’aamisay.
In baariDowladda ayaa khamiistii sidas go’aamisay.taan arrinDowladda ayaa khamiistii sidas go’aamisay.kan lagu sameeyey waxay ka mid aheyd heshiis dowladda iyo mucaaradku horey uga gaareen arrimaha socdaalka . Baaritaanka ayaa lagu eegi doonaa sidii xaqootiga loogu abuuri lahaa dhabayaal sharci ah oo ay ku soo galaan EU.
Ujeedaduna sidii qaxootiga u heli laheeyaan waraaqo ogalaansho oo ay ku soo galei karaan EU si ay looga maarmo in qaxootiga isku biimeeyay badaha iyo dhabayaasha kale qatar badan taas sannad kasta ay ku naf waayaan tiro badan oo qaxooti ah.
Maria Ferm (MP) waxay u kuurgeli doontaa sidii ay ku suurogeli karto in la abuuro dhabayaal sharci ah oo qaxootiga soo mari karaan.
– Waxaan u kuurgeli doonaa sidii ay ku suurogeli karto in la abuuro dhabayaal sharci ah oo lagu soo geli karo EU si qaxootiga ay magangeliyo uga dalbadaan gudaha EU. Sannadkii hore qaxootiga ku dhintay waxay ahaayeen 3,700 oo ruux, saddex meelood dadkas dhintay waxay ahaayeen carruur, ayey tir Maria Ferm
Waxay qabtaa in xaalkas yahay mid aan la aqbali karin.
– Ma ahn mid la aqbali karo in xaaladdan sii socoto.
Waxyaabaaha ay Maria Ferm u kuurgeli doonto waxaa ka mid ah tusaale in lagu caawiyo qaxootiga nooc waaraqo sharci ah oo ay oo qaxootiga u suurogelinaya in ay si sharci ah ku soo galaan EU kagana dalbadaan magangeliyo.
Sido kale waxay eegi doonta saameynta ay ku yeelanayso amniga haddii qaxootiga loo abuuro dhabayaal sharci ah oo EU ku soo galaan iyo weliba sida ay dhabayashan ku suuroobi karaan.
Hon ska också pröva vilka konsekvenserna kan bli när det gäller till exempel säkerhet och rent praktiskt.
Baaritaanka ayaa sidoo kale looga baarandegi doonaa sida looga dhaadhacin doono waddamada kale EU in qaxootiga loo abuuro dhabayaal shaci ah oo EU ku soo galaan.
In la baaro arrinkan waxay ka mid aheyd heshiis ay ka gaareen arrimaha socdaalka dowladda iyo mucaaradka dhamaadkii sannadkii hore.
Maria Ferm ayaa xisbiga Miljöpartiets horey ugu qaabilsaneyd heshiis ku saabsanaa qaxootiga oo Miljöpartiet la galay xukumaddii xisbiyada hanti-goosadka ah ee Alliansen.
Maanta waa horjoogaha xil-dhibaanada baarlamaanka ee Miljöpariet. Baaritaankan loo xil-saarey ayaa qaadan doona muddo labo sanno ah.
– Waa muhim in baaritan si qoto dheer loo sameeyo, saa darteed waqti ayuu qaadanaya, ayey Maria Ferm.
Laakiin labada sanno ee baaritaanka socdo micnaheeda xaalka sidiisa ayuu sii ahaanayaa, oo labadas sanno bad isku biimeynta qaxootiga waa sii soconeysaa?
– Sabab la xiirirta sugidda sharciga ayaa muhim ka dhigeysa in baaritaankan waqti qaato oo loo baaro si qoto dheer, ayey tirn Maria Ferm.